MD Farmaajo oo amarro kala duwan soo saaray . - Iftiin FM
MD Farmaajo oo amarro kala duwan soo saaray .
by Iftiin FM Reporter October 28, 2021
Madaxweynaha Soomaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aya amar kale ka hortagay in lagu takri-falo hantida dadweynaha, si musuq maasuq ahna loola wareego;
Madaxweyne Farmaajo oo ka duulaya xogta ku saabsan in dhulalka dan guud ah sida dhulka Ciidanka Asluubta ee Ex Kontorool Afgooye, goobaha waxbarashada iyo dhul kale oo ku yaalla Suuqa Siinaay iyo u sameynta dukumiinti sharci darro ah ayaa sheegay in dowladiisa ay bilowday baaritaan shakhsiyaadka ku lugta leh;
Madaxweyne Trump oo Amy Coney Barrett uu magacabay garsooraha maxkamada ugu sareysa Mareykanka.
1. Waxaa Xeer Madaxweyne lagu joojiyey heshiis kasta oo ku saabsan kala wareejinta, iibka, kireynta iyo qaab kasta oo la xiriira ka macaashka dhulka danta-guud, inta laga soo dhammeystirayo xeerarka iyo shuruucda Baarlamaan ee hageysa.
Qarax ka dhacay dalka Suuriya .
2. Maadaama Sharci Baarlamaanka Federaalku uu soo saaro ay xaddidi doonto baaxadda, muddada iyo shuruudaha rukhsadaha istcimaalka dhulka Danta-guud, lama bixin karo ruqsad ku saabsan isticmaalka si kumeel gaar ah ama abadiga ah ee berriga, badda iyo hawada sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dalka kasovo oo ay Maanta ka dhaceyso doorasho
3. Iyadoo la tixgelinayo xilligan dalku uu u jiheystay doorashada, Masuulkii isku daya in uu bixiya ama la wareego dhulalka danta guud, waxa uu qaadayaa masuuliyadda ka dhalata iyo cawaaqibta sharci ee la xiriirta ku takri-falka awoodda, dayacaadda danaha Qaranka iyo musuqmaasuqa amaanada shacabka Soomaaliyeed.
RW Justin Trudeau oo soo magacaabay golahiisa wasiirrada.
Sergi Barjuan oo loo magaacabay xilka tababarnimo ee Kooxda Barcelona.
Dowladda Ruushka oo fariin uu soo dirtay dowladda Soomaliya
Iftiin FM Reporter December 2, 2021
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ka hadlay weerar ka dhacay Magaalada Beledweyne
QM oo ka hadashay gargaarkii ugu horeeyay lagaarsiiyay G.Tigreey
AKHRISSO: Yaa cawa ku guuleysan doona Ballon d’Or 2021?
Iftiin FM Reporter November 29, 2021
Hooyo Soomaaliyeed oo gowracday cunug ay dhashay
PSG oo tababare Pochettino u fasaxday Manchester United
Iftiin FM Reporter December 1, 2021
Dawlada Mareeykanka ayaa Kenya markale ugu deeqday talaalka cudurka Corona Virus-ka
Iftiin FM Reporter November 27, 2021 November 27, 2021
Prof. Maxamed Cabdullaahi Ciise oo xil cusub loo soo magacaabay
Iftiin FM Reporter November 28, 2021
Madaxweyne Kenyatta oo ugu baaqay Kenyanka in ay qaatan tallaalka Cudurka corona
Iftiin FM Reporter November 30, 2021
Maxay ka wada hadleen Muuse Biixi & Madaxweynaha DDS?
Iftiin FM Reporter November 29, 2021 November 29, 2021
Kenya oo ka mid ah wadamada ugu qanisan
Ronaldo oo fariin diray kadib kulankii Chelsea
Amaanka guud ee Ismaamulka Kwale oo la adkeeyey